Ny Kafe tsara sy ny fisakanana tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Zavakanto & Kolontsaina Museums
Kafe 10 no mila mihinan-kanina amin'izao fotoana izao
Ny fanadihadiana mety amin'ny tranombakoka dia tokony hampidirina ao amin'ny cafe. Ny lavaka fanangonam-bokatra tsara dia afaka mamela ny mpitsidika hahatsapa ny zava-drehetra avy amin'ny divay nentim-paharazana avy amin'ny Queen Victoria any amin'ny Southern Comfort, izay ao anatin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa. Tsy milaza izahay fa ny toeram-pisakafoanana 10 manaraka dia misy toerana mahafinaritra kokoa noho ny tranombakoka miavona, fa matokia anay: aorian'ny ora maromaro dia mandany ny trano famakiam-boky sy ny efitrano, ireo kafe ireo dia valisoa azonao.
The Broad, any Los Angeles. The Broad
Ny sehatry ny kamiao ao The Broad no mahatonga azy io ho iray amin'ireo tranombakoka indrindra amin'ny Instagrammable , fa Otium kosa dia miankina amin'ny fahitana an'i Chef Timothy Hollingsworth, taloha tao amin'ny Laundry Frantsay tany amin'ny Napa Valley. Tsara ny misakafo tsy misy fombafomba, mametraka ny fifantohana amin'ny sakafo. Ny menio dia eklektika (mozika trondro miaraka foie gras, crepinette tail kisoa) ary miova hatrany amin'ny vanim-potoana.
Café Jacquemart-André: Jacquemart-André Museum, Paris
Ny Café dia tsy miankina amin'ny tranom-bakoka. Musée Jacquemart André
Ao amin'ny efitrano fisakafoanan'ny tranom-patana taloha izay misy tranombakoka antsoina hoe Jacquemart-André Museum, ny Café Jacquemart-André dia antsoina matetika hoe efitrano fidiovana tsara indrindra ao Paris.
Ny Café dia tsy miankina amin'ny tranom-bakoka, noho izany dia afaka mijanona mora foana ianao rehefa avy nividy ny Champs-Elysées rehefa avy nividy entana avy amin'ny Petite Marquise Pâtisserie Stohrer sy Michel Fenet.
Ny sakafo mahazatra dia misy amin'ny sakafo antoandro, saingy ny vahoaka dia azo antoka fa misakafo amin'ny alahady amin'ny 11 ora maraina ho an'ny brunch tena lamaody. Miova ny menus mba hameno ny fampiratiana ankehitriny.
Mitsitam Cafe: National Museum an'ny Indiana Amerikana, Washington, DC
Chef Freddie Bitsoie. Freddie Bitsoie
Ny mpitsidika dia nisafotofoto tanteraka ny trano fisakafoanana tao amin'ny Tranoben'ny Nasionalin'ny Indiana Amerikanina any Washington, DC, izay manolotra lovia avy amin'ireo kekinto indizeny any Amerika. "Mitsitam" dia midika hoe "avelao hihinana" amin'ny fiteny natokana ho an'ny mponina any Delaware sy Piscataway, fa ny sakafo dia mandrakotra ny sakafo avy amin'ny olona avy any amin'ny Woodland Northern tany Meso America.
Ny kolontsaina sy ny tantara dia miara-mivory ao amin'ireo toeram-pisakafoanana dimy izay ahitan'ny vahiny ny zava-drehetra avy amin'ny mofo malemy nalaina ho any amin'ny chili tsy hay hadinoina sy cornbread. Ny Chef Freddie Bitsoie dia mampiasa ny fampiofanana azy sy ny fiaviany amin'ny anthropology ara-kolotsaina sy ny tantaran'ny zavakanto mba hamoronana lovia izay manazava ny sakafo amerikana sy ny fomba nentim-paharazana. Manam-pahaizana fanta-daza, mampiasa ny sakafo ho fitaovana hampianarana ny olona momba ny kolontsaina Amerikana izy.
Ny Room Morris: Victoria & Albert Museum, Londres
Ny traikefa britanika tena goavana indrindra any London dia ny Tea Tea ao amin'ny efitra Morris ao amin'ny Museum Victoria & Albert. Ny V & A dia niara-niasa tamin'ny mpahay tantara momba ny sakafo Natasha Marks mba hamerina ny traikefa nentim-paharazana nataon'ny dite Queen Queen nandritra ny tolakandro izay ahitana ny siramamy siramamy antsoina hoe Beeton, mofo mofomamy sy voankazo voankazo.
Ny dite avo dia servisy isaky ny Alahady amin'ny 3-5 ora ao amin'ny efitra Morris, izay nalaina avy amin'ny fikasan'ny mpitarika ny hetsika Arts & Crafts, William Morris.
Ny tapak'i Victorian Afternoon dia mitentina 30 dolara isaky ny olona, ​​na 35 dolara isam-bolana amin'ny gaza prosecco. Tsy maintsy atao ny famandrihan-toerana.
Ny Modern: MoMA, New York City
Ny maoderina ao MoMA. Moma
Mianara tranombakoka iray manerantany miaraka amin'ny trano fisakafoanana Michelin, ary manana ny Modern amin'ny Museum of Modern Art ao New York. Miaraka amin'ny Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden, ny trano fisakafoanana dia feno hazavana mamirapiratra nandritra ny andro. Amin'ny alina dia lasa fanambarana Modernist izy io.
Ny sakafo dia manasongadina ny cuisine amerikana ankehitriny ny Chef Abram Bissell miaraka amin'ny fampisehoana izay hampahatsiahy anao ireo sary hosodoko Minimalista sy Constructivist ao an-trano ambony ambony. Mihazakazak'i Danny Meyer ao amin'ny Vondron'ny Vondrom-piarahamonina Union Square, ny tolotra dia mendrika sy mitazona ny politika vao nekena.
Ny traikefa faran'izay tsara indrindra azonao eto dia ny "latabatra fisakafoanana", latabatra fanasan-dehilahy efatra izay manomana sehatra amboara eo am-piandohana rehefa mijery chefs manomana sakafo atokana ho an'ny sainao.
Ny famandrihana dia mety ho sarotra ny mahazo ary afaka atao mihoatra ny 28 andro mialoha. Raha tsy afaka mamandrika ianao dia atsaharo ny fisotroana ao amin'ny bar, izay ahafahanao mandidy ny sakafo antoandro na ny sakafo hariva.
Museum Café: Collection Peggy Guggenheim, Venice
Venezoela Guggenheim eo amin'ny lakandranon'i Grand. Guggenheim Venice
Alao sary an-tsaina ny tenanao amin'ny fofom-bozaka italiana ary manindrona Aperol spritz raha hijery ny zaridaina maoderina ao amin'ny Grand Canal Venice . Ny Café ao amin'ny Peggy Guggenheim Collection dia toerana tena mahafinaritra ho an'ireo mpizaha tany handray ny toetran'i Venise, ary koa maminavina izay tsy maintsy ho toy ny tamin'ny fotoana nipetrahan'i Peggy Guggenheim voalohany ny Palazzo Venier dei Leoni ho toy ny trano ho azy, ary noho ny tahiriny ny taonjato faha-20.
Ny Café Café dia misakafo antoandro sy ny sakafom-bozaka ary manintona mandrakariva ny toeram-pitsangatsanganana eo anivon'ny fifamoivoizana goavam-be any Venise. Misokatra isan'andro 10 am-6 ora hariva, ankoatra ny talata.
Eleven amin'ny Crystal Bridges ao Bentonville. Crystal Bridges
Elefanta, trano fisakafoanana any Crystal Bridges, mankalaza sakafo mahazatra avy any amin'ny High South (Ozarks) miaraka amin'ny loko maoderina. Ny menaka toy ny "Lasantsy avy any Sweden Creek Mushroom Lasagna" miaraka amin'ny holatra shiitake ao an-toerana izay misy béchamel mipetaka, Gouda, ravinkazo, ary spinach izay ampiasaina amin'ny fifandonana voatabiha voatabiha sy ny fihenan'ny cabernet, dia mendrika ny dia mankany Bentonville irery. Ny "Strawberry Shortcake Tres Leches" dia toerana iray hafa.
Nampidirin'i Crystal Bridges koa ny kamiao vaovao antsoina hoe "High South on Roll" mba hampisehoana ny sakafo ambongadin'i Ozarks amin'ny fomba mahazatra sy mora ahazoana azy, ary mametaka an-tsokosoko ny sora-tanana maranin'ny Eleven amin'ny savony sandwich.
Amin'ny fampiratiana ny tranombakoka alemana sy oyrianina, ny Café Sabarsky malaza dia manadio pikantika tsara tarehy ao anaty tontolo izay ahafahanao misaina mora foana ao anatin'ny Adele Bloch-Bauer.
Natao ho toy ny trano kafe Vienne izay hihaonana amin'ny manam-pahaizana, ny Café Sabarsky dia voaravaka fiara fanakonana nataon'i Josef Hoffmann sy ny fametrahana an'i Adolf Loos. Ny piano lehibe Bösendorfer dia mipetraka eo an-joron'ny Café, ary ampiasaina ho an'ny seha-pandaminana kabary malaza ao amin'ny tranombakoka. Ary ny sakafo Sabarsky dia hita taratra ihany koa: ny sehatry ny cafe dia noforonin'ny chef Michelin-kardinaly Kurt Guttenbruner, iray amin'ireo manam-pahaizana manam-pahaizana indrindra momba ny kojakoja avy any New York.
Ny famandrihana sakafo atoandro dia ho an'ny mpikambana vaovao ao amin'ny New Galerie amin'ny ambaratonga fototra sy ambonin'izany. Ny famandrihan-tsakafo dia omena ho an'ny besinimaro. Ny New Yorkers matetika manao daty Zoma alina ho an'ny strudel.
Klint Café: Museum Museum Design, Copenhagen
Klint Cafe ao amin'ny Design Museum Danemark. Design Museum Danemark
Ny kanto nosy dia manohy mitaona ny chefs sy ny sakafo. Ary satria i Noma, fantatra ho iray amin'ny toeram-pisakafoanana tsara indrindra eran-tany, dia mihidy ho an'ny hoavy azo jerena (ary tsy azo antoka ny fiantohana latabatra, rehefa misokatra), mandinika ny fitsidihana ny Klint Café ao amin'ny Design Museum Danemark. Izany dia ny ankamaroan'ny fianakaviana, ary mora sy mahasoa, izay manampy amin'ny Copenhagen izay ahafahana mihinana sakafo. Tsy mila mandoa vola amin'ny fidirana ao amin'ny tranombakoka any ianao.
Ny sakafo fisakafoanana antoandro dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny latabatry ny sakafo latabatra dikan-teny matsiro feno feno hatsembohana, mameno fa sakafo vaovao. Ny sakafo dia miovaova sy miova foana. Ny vahiny dia mahita sandwiches misokatra izay miseho tahaka ny zavakanto manana endrika tsara, manasonia ny tsindrin-tsakafo Nordic sy ny sakafo amin'ny ankizy, anisan'izany ny sakay vita amin'ny legioma miaraka amin'ny legioma anana ao anaty fitoeran-jiro izay toy ny Lego goavy.
Russ & Filles: Ilay tranombakoka jiosy, New York City
Na ny trano fisakafoanana iray sy ny fitsangantsanganana ao amin'ny The Jewish Museum. Ilay tranombakoka jiosy
Ny Russ icon & ny zanakavavy vaovao ao New York dia efa fotoana fivahiniana ho an'ny New Yorkers sy ny mpizaha tany. Fantatra amin'ny trondro matsiro sy kitapo matsiro tsara tarehy, tena mafy ny ampahany amin'ny tantara jiosy ambany amin'i Lower East Side . Taorian'ny nanorenana orinasa an-tserasera sy tranokala fisakafoana mba hampifaliana ireo mpankafy mpankafy, dia nisokatra tao amin'ny The Jewish Museum ihany koa ny deli. Tsy toy ny trano fivarotana tany afovoan-tanàna izay nisokatra nanomboka tamin'ny taona 1914, dia ny Kosher ny toeram-pandehanana ao amin'ny The Jewish Museum.
Faly ireo mpankasitraka fa misy toeram-pisakafoanana iray sy toeram-pitsangatsanganana "mitsangatsangana" izay ahafahana mividy ny trondro mifoka sigara malaza ary tsy ilaina ny fanangonam-bokatra.
Vehivavy ao amin'ny Museo di Capodimonte
10 Tsy maintsy mijery ny fampiratiana zava-kanto
Mozika 10 natokana ho an'ny Kolontsaina Sakafo
Fipoahana: Galerie Uffizi
Martin Luther King Jr. ao Nashville
Pullman WA sy Guide Moscow Gay Gay Guide
Ambony rehetra amin'ny Express Hogwarts
Le Restaurant Restaurant Le Grand Colbert: Le tournée d'élégant à Paris à 1900
Ny sakafo falifaly ao Bruxelles
Fahadisoana iombonana mba hisorohana ny lalan'i Las Vegas
Ny Top Ten Free Things Manao any Louisville
Fomba hankalaza ny andron'ny Disneyland
9 Tokony ho Fantatry ny Trano Fotopampianarana ianao
Ny fiaran-dalan'i San Diego County dia mampiseho: Fiara Classic Cru Cruise
Ny Tetezan'i Rennes Bridge
Top orinasa tsara indrindra miasa any New York
Christmas Lights ao Seattle, Tacoma, Bellevue & Beyond